/ Kormeerkii Gudoomiyaha Baanka Dhexe ku soo maray laamaha Baanka Dhexe ee ku yaala magaalada Hargeisa. Kormeerkii Gudoomiyaha Baanka Dhexe ku soo maray laamaha Baanka Dhexe ee ku yaala magaalada Hargeisa. – Bank of Somaliland
Kormeerkii Gudoomiyaha Baanka Dhexe ku soo maray laamaha Baanka Dhexe ee ku yaala magaalada Hargeisa.
Guddoomiyaha Baanka Dhexe Mudane Cali Ibraahim jamac (Baqdaadi) oo ay weheliso Agaasimaha Qaybta Maamulka Arrimaha Shaqalaha, Amran Abdi Ismail ayaa koormeer ku Soo maray laamaha Baanka dhexe ee ku yaala magaalada Hargeisa, Gudoomiyaha iyo Agaasimaha waxay u kuurgaleen xaalaada ay ku sugan yihiin shaqaale weynaha ka howl gala Laamaha baanka ee laanta 1aad, Laanta 2aad iyo Laanta 3aad ee Dumbuluq iyo qaar ka mid ah qaybaha uu ka kooban yahay Baanka dhexe ee JSL.
Masuuliyiintani waxay kulmo gaar-gaar ah la yeesheen Shaqaalaha iyo maamulayaasha laamahaas iyaga oo ka xog-wareystay Xaalada dhabta ee ku sugan yihiin laamaha iyo qaybaha Baanku , iyagoo indho indheeyey habsami u socodka howlaha baanka.
Ugu danbayntii, Gudoomiyuhu wuxuu dhamaan Shaqaalaha iyo Maamulka uu la kulmay kala dardaarmay:-
1. Ilaalinta saacadaha shaqada.
2. Sidii macaamiisha baanka Si Fiican loogu shaqeyn lahaa.
3. Kor u qaadida sumcada baanka.
4. Joogtaynta Direyska baanka .
5. Ilaalinta sirta baanka.
Waxa kale oo uu xusay Gudoomiyaha baanka dhexe in Dalacaadaha shaqaalaha lagu qiimeyn doono qof kasta performance kiisa ama shaqo wanaagiisa, Gudoomiyahu waxaa kale oo uu sheegay in uu joogtayn doono kormeerkiisa Insha Allah.
Arrinkaas oo Shaqaalahu aad ugu riyaaqeen isla markaana rajo-weyn gelisay dhamaan shaqaalihii ay la kulmeen.
Guud ahaan koormeerka Gudoomiyaha iyo Agaasimaha Qaybta Shaqalaha oo daranaa xogogaal u noqoshada Habsami u socodka shaqada baanka,ku ayaa dhamaaday Guul.